Ithegi: umxholo ohlawulelweyo | Martech Zone
Ithegi: umxholo ohlawulelweyo
NgoMgqibelo, Oktobha 31, 2015 NgoLwesibini, Novemba 3, 2015 Douglas Karr
Esi sithuba asiyongxoxo-mpikiswano, kwaye andizami ukuqala impikiswano noWil Wheaton kunye neposti yakhe, awungekhe uhlawule irente ngeqonga elikhethekileyo kwaye ufikelele kwindawo yethu. UWil Wheaton luphawu olusekwe kunye nokulandelayo okubalulekileyo. Usebenze nzima ukukhulisa abaphulaphuli kunye noluntu- yiyo loo nto isikhalo kunye nesivumelwano kunye nokuma kwakhe. UWil Wheaton wayenembeko kwimpendulo yakhe. Wayekwanobuqaqawuli bokwenza loo nto